DUULAAN NAGU DIIN AHAYN INAAN DIFAACNO
Ilaah baa mahad leh, nabadgelyo iyo naxariis Eebe korkiisa ha ahaato midka ugu sharfanaa uguna danbeeyay, Rususha iyo Nabiyada Eebbe Muxammed(nnk).
GEFKA KA CELI WALAALKAA.
Anigoo ka waano qaadanaya xadiiskii Rasuulka Suuban ee ahaa “U gargaar walaalkaa haddii laga gardaran yahay iyo hadduu gardaran yahayba.” Aadna ugu gargaarayso markuu gardaran yahay inaad gacanta ka qabato, oo aad gardaraysiga ka celiso.
DIFAACIDA QOFAAN MUSLIM AHAYN.
Ayaan waxaan doonayaa inaan mowduuceygaan kaga hadlo, arrin aan u wanaagsaneyn qofka muslimka ah, oo ah inuu difaaco qof aan muslim ahayn, isagoo leh “Dadku waa adoommo Ilaah, oo asagaa abuuray, mar hadduu qofku rumeysan yahay Eebbena, Ilaah ayaa siduu rabo ka yeelaya, inuu u naxariisto iyo inuu cadaaboba. Waxa taa nagu qasbaya inaan ku difaacnona ay tahay uun, qofkaa oo dad la dhaqankiisu wanaagsan yahay. u naxriista, u tura, oo kaalmeeya dadka. Uuna ogyahay dhibaatadooda, u gargaaro, garab joogo, oo wax walba oo wanaaga la jecel yahay makhluuqa ilaah oo dhan.
MURAN KUMA JIRO MIDAA.
Waxaan muran ku jirin in dadku adoommo Ilaah yihiin iyo inuu Ilaah asagu siduu doono ka yeeli karo, balse bina’aadamku inuusan Ilaah godb ka tiran, uuna marmarsiiyo u helin, oo uuna u oran “Ilaahoow maxaad ii cadaabeysaa? Haddaan ogaan lahaa waxaan aad igu cadaabeyso, ma aanan sameeyeen, ee Eebboow maxaad iigu cadeyn weyday? Ayuu Ilaah wuxuu u soo dajiyey kutub samaawi ah, oo wax ku faraya waxna kaa reebaya, uunausoo dhiibay rusushiisa.
KAN UGU CAASISAN MAKHLUUQA ILAAH.
Bina’aadamkuna mar walba yahay kan ugu caasisan makhluuqa Eebbe. Markaana mar walba oo uu bina’aadamku ka leexdo jidka Illaah faray, uuna xalaaleysto wixii laga xaaraantinimeeyay, oo uu hawaddiisa la lumo, ayuu haddana Illaah u cadeynaayay bina’aadamka qaladaadkiisa, uuna u deyneyn inuu iska lumo. Oo wuxuu u soo jadiidinayay Risaaladiisa iyo Rusushaba. Ilaa laga soo gaaray Rasuulkeena Suuban Muxammed(nnk). Kaasoo Risaaladiisa lagu soo gabagabeeyay Risaaladaha Eebbe, oo Risaalad ka danbeyneysa Risaaladiisa ayan jirin. Risaalad dunida guudkeeda jirta oo uu Ilaah aqbalayaana ayan jirin ilaa Islaamka maahee, midaana ay ku cadahay kutubta diimeed ee maanta jirta.
XAQ DIIDE CADAAB MUTEYSAY.
Marka qof diiday Risaalada Ilaah oo indhaha ka laabtay, inaan niraah Ilaah buu rumeysan yahay, oo asaga(Ilaah) ayaa siduu doono ka yeelya, nalama gudboona. Qof walba oo xaqa diida wuxuu muteysanayaa cadaabka Ilaah, diin iyo darajo walba oo uu lahaado.
AAN U NAXARIISANO, U NASTEEXEYNO…
Waxaa markaa nala gudboon intaan u doodi lahayn dadkaan inaan difaacno, oo garsiino, inaan u naxariisano,u nasteexeyno, oo aan cadaabka Ilaah ka badbaadino, inagoo u bandhigeyna Risaaladda Islaamka, tusaynana sharafta iyo qiimaha ay leedahay Diinteenu.
CANAAD, ISLA WEYNI IYO KIBIR XAQA KUMA TUSAAN.
Taasoo qof xaqa inuu ogaado doonaya uuna diidi karin, ilaa qof canaad, isla weyni iyo kibir ka buuxo maahee, hadday arrimahaa qofka ka reebaan inuu xaqa arko, oo nagu diido xaqa. Markaa waa inaan bari ka noqonaa, oo wax jeceyl aan u qabnaa iyo isku damqasho uuna jirin dhexdeena, oo aanan inuu na sharfo ama cisoba aanan ka doonan, sharaf iyo ciso waxay noogu jirtaa diinteena.
QOOM ILAAH ISLAAMKA KU CISEEYAAN NAHAY.
Xaqiiqdii waa waxa maanta uu Ilaaheey dusha duliga nooga tuuray, haddaan nahay dadka muslimiinta ah, oo heybadeenii iyo sharafteenii u dhuntay, markaan jidaan jidka Islaamka ahayn sharaf iyo ciso ku doonay. “WAXAAN NAHAY QOOM UU ILAAHAY CISO KU SIIYAY ISLAAMKA, HADDAAN CISO KU DOONO JIDAAN ISLAAMKA AHAYN, ILAAHAY WUU NA DULEYN”
Sidaa waxaa yidhi Kala soocihii xaqa iyo baadilka CUMAR BINU AL-KHADAAB
Duulaan nagu diin ahayn intaan difaaceyno, ayana ay dabin noo daadinayaan iyo dibindaabyo joogta ah, Daa’imkeena uu nooga digay dowgey nala doonayaan, waa nagu doqonimo duli dusha inaan u ridanaa oo, waxay naga dalbi, oo dugsidaa xiroo,duruustaa da’ yarta ha barina, aan ku darajeynaa.
Wasalaamu caleykum waraxmatulaahi wabarakaatuhu.
F.G. Cinwaanka mawduucu waa “DUULAAN NAGU DIIN AHAYN INAAN DIFAACNO”.